UJames Monroe, uMongameli we-5 we-United States
UMonroe wayekhonza njengomongameli ngelixesha "leemvakalelo ezilungileyo."
UJames Monroe (1758-1831) waba ngumongameli wesihlanu wase-United States. Walwa e-American Revolution ngaphambi kokubandakanyeka kwezopolitiko. Wayekhonza kwiibhabhinethi zombini zikaJefferson kunye neMadison ngaphambi kokuwina uongameli. Uyakhunjuzwa ngokudala iMfundiso ye-Monroe, isicwangciso esisisiseko somgaqo-nkqubo welizwe lase-US.
U-James Monroe woBuntwana kunye neMfundo
UJames Monroe wazalwa ngo-Aprili 28, 1758, waza wakhula eVirginia.
Wayeyindodana yesityalo esincinane. Unina wafa ngaphambi ko-1774, kwaye uyise wafa kungekudala emva kokuba uYakobi eneminyaka eyi-16. Wafunda eCampbelltown Academy waza waya eKholeji likaWilliam noMary. Wayehla waya kujoyina i-Continental Army kwaye walwa e-American Revolution. Kamva wafunda umthetho phantsi kukaTomas Jefferson .
UJames Monroe wayengunyana kaSpence Monroe, isityalo kunye nomchweli, kunye no-Elizabeth Jones owayefundiswe kakuhle ixesha lakhe. Wayenodade omnye, u-Elizabeth Buckner kunye nabazalwana abathathu: U-Spence, uAndreya noJoseph Jones. NgoFebruwari 16, 1786, uMonroe watshata no-Elizabeth Kortright. Babeneentombi ezimbini: uEliza noMaria Hester. UMaria wayetshatile kwiNdlu ye-White House ngoxa uMonroe wayengumongameli.
U-Monroe wakhonza kwi-Continental Army ukususela ngo-1776-78 waza wavuka waya kwizinga eliphezulu. Wayekunceda-de-ekampini kwiNkosi Stirling ngexesha lebusika kwiVall Forge .
Emva kokuhlaselwa ngumlilo weentshaba, u-Monroe wahlutha umzobo waza waphila ubomi bakhe bonke ngebhokisi le-musket efakwe phantsi kwesikhumba.
UMonroe naye wenza njengesikhewu ngexesha leMfazwe yaseMonmouth. Washiya ngo-1778 waza wabuyela eVirginia apho uMphathiswa uGeorge Jefferson wamenza uKhomishana wamaMpi eVirginia.
Umsebenzi kaJames Monroe Ngaphambi koMongameli
Ukususela ngo-1782-3, wayeyilungu leNdibano yaseVirginia. Wajoyina i-Continental Congress (1783-6). Washiya ukwenza umthetho waza waba nguSenethi (1790-4). Wathunyelwa eFransi njengoMphathiswa (1794-6) waza wakhumbula iWashington. Wonyulwa iRhuluneli waseVirginia (1799-1800; 1811). Wathunyelwa ngo-1803 ukuba athethe i- Louisiana Purchase . Emva koko waba ngumlungiseleli eBrithani (1803-7). Wasebenza njengoNobhala weeRhulumente (1811-1817) ngeli xesha ephethe isikhundla seNobhala weMfazwe ukususela ngo-1814-15.
UMonroe wayengumongameli wokhetho lukaThomas Jefferson noJames Madison . I- Vice kaMongameli wakhe nguDaniel D. Tompkins. AmaFederalists agijima uRufus King. Kwakukho inkxaso encinci kwi-Federalists, kwaye iMonroe yanqoba i-183 kuma-217 amavoti okhetho. Oku kwaphawula i-knell yokufa kwiQumrhu lika-Federalist.
Ukuphinda kwakhona ukhetho ngo-1820:
I-Monroe yinto ecacileyo yokukhethwa kwakhona kwaye yayingekho mdlali. Ngenxa yoko, kwakungekho phulo langempela. Wamkela onke amavoti okhetho ukonga omnye owawunikwa nguWilliam Plumer ngoJohn Quincy Adams .
Iziganeko kunye neempumelelo zikaMongameli kaJacob Madison
Ulawulo lukaJames Monroe lwalubizwa ngokuba yi " Era of Feelings Good ". I-Federalists yabangela ukuchaswa kancinci kunyulwa lokuqala kwaye akukho nxalenye yesibini kwaze kwabakho ezopolitiko zentsebenziswano.
Ngexesha lakhe e-ofisini, uMonroe kwafuneka alwe neMfazwe yokuqala yeSininole (1817-18). Xa amaNdiya ase-Seminole kunye namakhoboka aphunyukileyo ahlasela iGeorgia esuka eFlorida yaseSpain. UMonroe wathumela uAndrew Jackson ukulungisa imeko. Nangona bexelelwe ukuba bangabhubhisi iSpain-eqhutywe eFlorida, uJackson wenza kwaye wafaka igosa lempi. Ekugqibeleni ekukhokelela kwiSivumelwano se-Adams-Onis (1819) apho iSpeyin yawela khona iFlorida iya eUnited States. Kwakhona kwashiya yonke iTexas phantsi kolawulo lweSpain.
Ngomnyaka we-1819, iMelika yangena ekudakaleni kokuqala kwezoqoqosho (ngelo xesha elibizwa ngokuba yiPicic). Oku kwada kwafika ngowe-1821. I-Monroe yenza ukunyuka ukuzama nokunciphisa iziphumo zokudandatheka.
Iintuthuko ezimbini ezibalulekileyo ngexesha likaMongameli we-Monroe yi- Missouri Compromise (1820) kunye ne- Monroe Doctrine (1823). I-Compromise yaseMissouri yamkela eMissouri kwiNyunyana njengombutho wekhoboka kunye neMaine njengesikolo samahhala.
Kwakhona kwanikezela ukuba yonke indawo yaseLouanaana yokuthenga ngentla kwii-degrees ezingama-36 kwiimitha ezingama-30 yayiza kukhululeka.
I-Monroe Doctrine yakhishwa ngowe-1823. Le nto yayiza kuba yinxalenye ephambili yomgaqo-nkqubo waseMelika wangaphandle kwi-19th century. Kwintetho phambi kweNgqungquthela, uMonroe waxwayisa amandla aseYurophu ngokunciphisa ukwandiswa nokungenelela kwiNtshona yeHlabathi. Ngelo xesha, kwakudingeka ukuba iBritani ikuncede ukunyanzelisa imfundiso. Kanye kunye no- Theodore Roosevelt we- Roosevelt Corollary kunye noMgaqo-nkqubo omhle woMmelwane waseFranklin D. Roosevelt , iMfundiso ye-Monroe isengxenye ebalulekileyo yomgaqo-nkqubo waseMelika wangaphandle.
Ixesha leMongameli kaMongameli
UMonroe wasethatha umhlala-phantsi e-Oak Hill eVirginia. Ngomnyaka we-1829, wathunyelwa waza wabizwa ngokuba ngumongameli we-Virginia Conventional Convention . Wathuthela eNew York City ngokufa komfazi wakhe. Wafa ngoJulayi 4, 1831.
Ixesha likaMonroe e-ofisi laziwa ngokuba yi "Era yeemvakalelo ezilungileyo" ngenxa yokungabikho kwezombusazwe. Oku kwakukuzola phambi kwesiqhwithi esiza kukhokelela kwiMfazwe yombutho . Ukugqitywa komnqophiso we-Adams-Onis kwagqitywa kunye neSpeyin ngokuqokwa kwabo eFlorida. Iziganeko ezibini ezibaluleke kakhulu nangona kunjalo yi- Compromise yaseMissouri eyazama ukuxazulula ingxabano enokuzikhethela kunye neentetho zekhoboka kunye ne- Monroe Doctrine eya kuthintela umgaqo-nkqubo wangaphandle waseMerika ukuya namhlanje.
IWarren G Ukuxinisa Izinto Ezikufutshane
I-Biography kaMillard Fillmore: UMongameli we-13 we-United States
Intetho Enkulu kakhulu ka-Abraham Lincoln
Amazwi kaJames Madison Fast
Fumana umndeni kaDonald Trump
UDwight D. Eisenhower - UMongameli we-36 we-United States
UFranklin Pierce - Mongameli we-14 we-United States
Ziziphi iiglovu ze-Bike
Isikhokelo esifutshane kwiZikolo ezinkulu zeBuddhism
Imiba kunye nokuPhepha
IYunivesithi ye-Rice, i-SAT, kunye ne-ACT Data
Sebenzisa i-Google Earth ukuhlola i-Cosmos ngaphandle kwePlanethi yethu
Amazwi angamaSanskrit aqala ngo-R
Iingqungquthela kwiiNgxelo zeRhetorical
Ibhishobhi yaseBridget: Ukuqaliswa koMlingo wokuqala we-Salem, ngo-1692
Bass Scales - I-Scale enkulu
Izikhokelo zeCython's String Templates
Ukuvelisa izithelo kunye novavanyo lwe-Ethylene
IiNzuzo zePhepha lokuSetyenziswa kwePhepha
Ukulawula i-Ascii (Umbhalo) Iifayile ezivela kwiKhowudi
Intshiseko YamaKristu Ukunyaniseka Quiz: Unenyaniso Kangakanani?
Kutheni ixabiso leeyile kunye neeDola zaseCanada zihamba kunye?
25 Iifoto zeentsapho ezenza kakubi
UWilliam Le Baron Jenney, uYise we-American Skyscraper
I-Denisovans - Iintlobo zeThathu zoLuntu
I-Biography yeAda Lovelace
I-Buttress kunye ne-Flying Buttress